Flood Nuux Archives - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Calaamadaha ku jira Tawreed iyo Quraanka
Tag: Flood Nuux
Waxaan sii wadidoonaa oo aan si taxane ah u sii wadidoonaa ilaa iyo biloowgii (Aadan/Xaawo iyo Qaabiil/Haabiil) iyo Nebigeena ku xiga ee mudan xusid lagu xusay Tawreedka waa Nuux (NNKH), kaasoo ku noolaa 1600 sano Aadan ka dib, laakiin waa maxay calaamada Nuux ee aan u baahanahay in aan siino fiiro gaar ah? Fadlan riix Halkan inay akhriyaan xisaabta Nuux (NNKH) ee Tawreedka iyo Quraanka.
La’aanta vs. Helida naxariista
Marka aan la hadlayo reer galbeedka oo aan kala hadlayo arrimaha ku saabsan Ilaah iyo qiyaamaha, jawaabta aan inta badan helo waa wax u eg, “Ma aan ka walwal qabo qiyaamaha maxaa yeelay Isagu waa mid naxariis badan mana aan filayo in uu Isagu runtii i xukumi doonaa”. Waa tan xisaabtanka Nuux (NNKH) keentay in aan run ahaantii weydiino sababaynta. Haa, Ilaah waa uu naxariis badan yahay, maxaa yeelay Isagu ma uu isbedelo oo weliba wuxuu ka buuxay naxariis wakhtigii Nuux (NNKH). Weli dunida oo dhan (marka laga reebo Nuux iyo qoyskiisa) Waa la wada baabbi’iyey oo la xukumay. Sidaas daraaddeed dee meeday naxariistiisii? Waxay ahayd oo ay ku jirtay doonnida.. Sida Ayaadka 64 ee Al-Araf noo sheegay:
ku korinay Nuux iyo intii la jirtay Doontii
Ilaah naxariistiisa, isagoo isticmaalaya Nebi Nuux (NNKH), waxa uu diyaariyey doonni diyaar u ahaa qofkasta oo la heli karo. Qof kasta ayaa laga yaabaa in ay soo geli karayn doonniidaas oo hadana heli karayn naxariis iyo ammaan. Dhibaatadu waxay ahayd ku dhowaad dhammaan dadka ka jawaabay farriinta ma’aysan rumaysanayn. Waxay ku jees jeeseen Nuux (NNKH), mana ayn rumayn in qiyaame soo socda. Hadday ahaan lahaayeen kuwo doonnida galay waxay ka baxsan lahaayeen qiyaamaha.
Qayb ka mid ah Qur’aanka Kariimka ah sidoo kale waxa uu inoo sheegayaa in mid ka mid ah wiilashii Nuux rumeeyey Ilaah iyo qiyaamaha soo socda. Xaqiiqda dhabta ah ee uu isku dayayay in uu fuulo buur waxay muujinaysaa in uu isku dayayey in uu ka baxsado xukunka Ilaah (oo sidaasuu ku rumeeyay Ilaah iyo Qiyaamaha) uuna doonayey in uu ka baxsado. Laakiin mar kale waxaa jiray dhibaato. Ma uusan isu gayn aaminsanaa la socoto adeecid iyo doorasho halkii uu ka go’aansaday in uu keli ahaa isula shaqeeyo si uu uga baxsado qiyaamahaas. Laakiinse aabbihiis wuxuu u sheegay:
Waxba maanta ma badbaadin karo, ka amarka Ilaah, kasta laakiin kuwa cidduu u naxariistaa wuu karaa!
Innan kani waxa uu u baahan yahay naxariista Ilaah, ma u baahna dadaal u gaar ah si uu uga baxsado xukunkan. Dadaalkiisa uu ku fuulay buurta waxay ahayd mid aan waxtar lahayn.
Sidaas natiijada isagu waxay la mid ahayd sidii kuwii ku jees jeesay Nabiga Nuux (NNKH) – waxay u ahaatay dhimasho biyo hafiyeen. Haddii kaliya uu doonnida galay ayuu sidoo kale ka soo baxsan lahaa qiyaamaha. Sidaas daraadeed waan naqaan in aaminaad Ilaah iyo qiyaamaha kuma filna oo keliya in aad ka baxsato. Dhab ahaantii, waa in aad aqbashid aaminaada in Ilaah naxariis sameeyo, oo ma ahaan fikrado noo gaar ah, halkaas oo aanu hubin karno in aan heli doonaa naxariis. Tani waa calaamadii Nuux inoo ahaatay – doonnida. Waxay ahayd Calaamad xukunka Ilaah dadweynaha u ah, iyo sidoo kale hab oo uu Isagu ku muujinayey naxariis iyo fakasho. Iyadoo qof kasta uu daawaney in waxa la dhisayey waxay noqotay calaamad qiyaamaha soo socda iyo in la heli karo naxariis. Laakiin waxaa ay muujinaysaa in naxariistiisa lagu gaadhi karaa oo kaliya iyada oo loo marayo bixinta uu Isagu aasaasay.
Sidaas aawgeed waa maxay sababta Nuux uu u helay naxariista Ilaah? Tawreedka ayaa soo celceliyay dhowr jeer weedhan
Oo Nuux uu sameeyey dhammaan waxii Ilaah isaga ku amray
Waxaan ka heli in aan sameeyo wixii aan fahamsanahay, ama waxa aan jeclaan, ama waxa aan ku raacsanahay. Waxaan Hubaa in Nuux (NNKH) waxaa maankiisa ku jiray su’aalo badan oo ku saabsan digniinta Ilaah ee daadka soo socda iyo amarkiisa si uu uga dhiso sanduuq weyn dhulka. Waxaan hubaa in uu sababayey laga yaabaa in tan iyo markii uu ahaa nin wanaagsan siyaabo kale markaas uma baahnayn in uu ku bixiyo fiiro gaar ah si uu u dhiso doonidan. Laakiin isagu wuu sameeyey‘dhamaan‘ ee lagu amray – Ma ahan oo keliya waxa aabbihiis u sheegay, mana ahan waxa uu fahamsan yahay, mana ahan waxa uu raali ka ahaa, oo xataa ma ahayn waxa isaga dareen u sameenayey. Tani waa tusaale weyn oo aan raaci karno.
Tawreedka ayaa sidoo kale inoo sheegaaya in Nabi Nuux ka dib, qoyskiisa, iyo xayawaankii ay doonnida galeen.
Markaasaa Ilaah wuxuu ku xidhay isagii.
Waxay ahayd Ilaah in uu gacanta ku hayey Isagoo maaraynayey albaabka sanduuqii – ee uusan ahayn Nuux (NNKH). Markii qiyaame yimid oo biyuhuna yimaadeen, si kasta oo ay u garaacaan dadka banaanka joogay doonida waxba kama tari karin in uu Nuux albaabka furo. Ilaah baa gacanta ku hayey albaabkaas keli ah. Laakiin kuwa gudaha ku jiray waa laga yaabaa inay ku nasan kareen kalsooniga in Ilaah maamulo albaabka oo aysan waxba waxyeeli karin oo aysan dabaysha ama hirrarku uusan furi karin albaabka. Waxay ahaayeen kuwo nabdoon albaabka daryeelka Ilaah iyo naxariistiisa.
Maadaama uusan Ilaah isbedelin sidoo kalena tan waa ay ina khusaysaa. Oo nebiyadii oo dhammuna waxay inooga digeen in ay jirto qiyaame kale oo soo socda – Iyadoo tanina ay tahay mid dab – laakiin calaamada Nuux (NNKH) wuxuu noo hubinayaa in imaanshaha qiyaamaha uu bixin doonaa naxariis. Laakiin waa in aan raadinaa in uu ‘doonida’ hal albaab leh ay kafaalo qaadi doono in la heli doono naxariis.
Tawreed ayaa sidoo kale waxa uu inoo sheegayaa in Nuux (NNKH):
Nuuxna meel allabari buu Ilaah u dhisay; xayawaankii daahirka ahaa iyo haaddii daahirka ahaydba, intuu wax ka qaatay, ayuu allabaryo la gubo ku bixiyey meeshii allabariga dusheeda. (Bilowgii 8:20)
Tani waxay ku haboon tahay tilmaantii Aadan/Xaawo iyo Qaabiil/Haabiil oo xoolaha ku allabaryaya. Taas macnaheedu waxa weeye, mar labaad, in dhimashada xoolaha iyo dheecaan dhiig waxay ahayd sida Nabiga Nuux (NNHK) u tukan jiray, oo waxaa u oggolaaday, Ilaah. Dhab ahaantii Tawreed ayaa sheegay in allabariga ka dib, Ilaah ‘uu barakeeyey Nuux iyo wiilashiisii’ (Bilowgii 9: 1) oo uu ‘axdi la dhigtay Nuux’ (Bilowgii 9:8) si aysan mar dambe dhammaan dadka oo idil, aan daad lagu xukumin. Sidaas waxa ay u muuqataa in allabariga, dhimasho, iyo sidoo kale dheecaanka dhiigga xoolaha Nuux wuxuu u ahaa mid muhiimad u leh caabudiisa Ilaah. Sidee muhiim u tahay tani? Waxaan sii wadi doonaa daraasadeennii aan ku wadnay nebiyadda Tawreed, oo uu Luudh/Luudh soo socda.
Author [email protected]Posted on 25/04/2016 14/05/2018 Categories Calaamadaha iyo Mucjisooyinka ku qoran Tawreed iyo Qur’ankaTags Bilowgii daad, calaamada nebi Nuux, calaamada Nuux, Flood Nuux, Nebi Nuux, Nebi Nuux ku Tawreed, Nebi Nuux Quraanka, nebiyadii Islaamka, Nuux, Nuux Ark, Nuux daad, Nuux in al kitab, Nuux in bible, Nuux in Islam, Nuux Nebi, Nuux nebi al kitab, Nuux NNKH, sanduuqii Nuux, waxa aanu Quraanka yidhaahdo oo ku saabsan NuuxLeave a comment on Calaamada Nuux
Halkee buu ka Yimi Ciise ?